Izindaba - Abalandeli be-BTS baseNdiya baqoqa imali ngokushesha ukuze balwe nokukhula kwezwe
Abalandeli be-BTS baseNdiya baqoqa imali ngokushesha ukuze balwe nokukhula kwezwe
isimo esibucayi se-coronavirus
Ngalesi simo esikhulayo se-coronavirus yaseNdiya, abalandeli be-BTS bathathe isinyathelo sokuthola imali yokusiza labo abadinga usizo.
Ngesonto eledlule, imizamo yokusiza i-Covid-19 edidiyelwe yiqembu leqembu labalandeli be-BTS elaziwa ngokuthi yi-Army, iqoqe ama-rupees angaphezu kwezigidi ezimbili (ama-US $ 29,000).
Ididiyelwe esizeni soxhasomali saseNdiya iMilaap, i-akhawunti yenkundla yezokuxhumana eyaziwa ngokuthi "i-Covid Relief India by BTS Army" inyuse ama-rupee angaphezu kwezigidi ezimbili ngamahora angama-24, nabasekeli abangama-2,465 banikela.
Ingabe unemibuzo mayelana nezihloko ezinkulu namathrendi avela emhlabeni wonke?Thola izimpendulo ngolwazi lweSCMP, inkundla yethu entsha yokuqukethwe okukhethiwe nabachazi, Imibuzo Evame Ukubuzwa, ukuhlaziya kanye ne-infographics elethwa kuwe ithimba lethu eliwine imiklomelo.
Umqoqi wezimali ufike ngesikhathi sodlame lwesibili lwezwe lwe-coronavirus, kanye namacala nokufa kwabantu okungakaze kubonwe njengoba i-India ibhekene nenkinga yezempilo edalwe ngokwengxenye ukushoda kwezinsiza zokwelapha - okuhlanganisa nokuntuleka komoyampilo - kanye nolunye uhlobo olusha lwaleli gciwane.
Imizamo yokupha amasosha igxile kakhulu ekuhlinzekeni umoya-mpilo nezinye izinto zokwelapha, kanye nokudla kulabo abaswele.Lo mkhankaso ubeke eMaharashtra naseDelhi, lapho isimo esiphathelene nalolu bhubhane siyingozi.
Ngokusho komkhondo we-Covid-19 waseJohns Hopkins University, kusukela ngoMsombuluko ekuseni, i-India ibe namacala acishe abe yizigidi eziyi-17, nokufa kwabantu abangaphezu kuka-192,000.Esontweni eledlule, i-India ibike izivivinyo ezingaphezu kuka-300,000 ngosuku;kuningi okukhathazayo ngokuthi izifo azibikwa kangako.
Iziguli zase-India ze-coronavirus zidonsa umoya phakathi nokushoda komoyampiloAmazwe amaningana amemezele ukuthi azohlinzeka ngosizo, kodwa amalungelo obunikazi avimba i-India namanye amazwe ekukhiqizeni umuthi owanele wokwelapha abantu bakhona.
Izindatshana eziningi ezivela ku-SCMP
Izinguquko ohlelweni lokhetho lwase-Hong Kong zisalokhu zithengiswa kanzimaECambodia, ukuvalwa kwe-Phnom Penh coronavirus okunwetshiwe kushiya abasebenzi bezingubo, abathengisi bemakethe belambileIzihlabani zase-Korea ezingu-8 'zikhanseliwe' ngemva kwamahlazo: U-Seo Ye-ji wehliswa e-K-drama Island, kwathi u-Ji Soo washiya uMfula Lapho Inyanga Iphuma - futhi angase amangalelwe amaRandi ayizigidi ezingu-2.7Ingxabano yomngcele waseChina neNdiya: ingabe ukuphuma kweNew Delhi echibini iPangong Tso kwakuyiphutha?
Phakathi nokungezwani kwe-US-China, i-Asia kumele ihlangane ukuze ibuyise isiphetho sayo
Lesi sihloko savela okokuqala kwi-South China Morning Post (www.scmp.com), intatheli yezindaba ehamba phambili ebika nge-China ne-Asia.
Isikhathi sokuthumela: Apr-27-2021
Imikhiqizo Eshisayo - Imephu yesayithi - I-AMP Mobile I-Pharmacy Surgical Mask, Imaski yaseChina, I-China Protective Mask, I-FFP2 Respirator, Imaski yobuso, I-PPE Mask,